Trichomonas lezinkinobho - Izifo Izitho zangasese, kubangelwa Trichomonas ethize silwanyana uyakwazi ezihambayo esebenzisa flagella.
Lokhu silwanyana kuyingozi ngoba kungabangela izimpawu zokwelashwa elilodwa umlingani, kodwa pathogenic enye. Isikhathi bayashintshana ekufukameleni ihlala ejele usuku olulodwa kuya inyanga yonke. Phakathi nalesi sikhathi, igciwane esandisa elibonakalayo ulwelwesi lwamafinyila of umthondo, bese kukhona izimpawu.
Trichomonas lezinkinobho ngokuvamile kwahambisana by ezinye izifo zangasese, okuholela igciwane okuxubile okuyinto belashwa nzima kakhulu kunokujwayelekile.
Yiqiniso, ayikho ukutheleleka ayikwazi azithalalise. Ngisho amakhala yisisu eshiya kubika iKickOff.com ngoLwesithathu.
Yini esongela Trichomonas lezinkinobho abesifazane?
Ake uqale nge yokuthi iyiphi inqubo sokugembula kwesimiso sokuzala kuholela ukwehluleka nomjikelezo wokuya esikhathini, okuyinto okunzima kakhulu ukubuyisela.
I ngokobulili sphere owesifazane ngokumelene isifo iqala ukushabalala. Sexual ubuhlungu, engalethi ukwaneliseka.
Trichomonas lezinkinobho ephelezelwa ukulunywa futhi uyakhathaza ukungakhululeki mass, kanjalo ekushintsheni isimo esingokomzwelo uzakwethu, kuba uvalo, ukucasuka futhi uhluthuke.
Ngakho, lesi sifo sihlasela hhayi kuphela ubuhlungu kakhulu, kodwa futhi kubantu ezizungezile.
Lesi silwanyana kungathinta kuphela uhlelo urinary, kodwa uma inqubo iyekwa ingelashwa isikhathi eside, maduzane esiqukethe zonke izitho okhalo.
Trichomonas kungenziwa esisogwini ngemomozi, ebusweni engaphakathi labia, udonga lwesitho sangasese sowesifazane kanye esibelethweni. Ngakho Trichomonas vulvovaginitis Kungenzeka kukaningi kuqhamuke acute kumafomu okungamahlalakhona, ezisabalele kakhulu esinzima ngokwengeziwe.
I umugqa omncane phakathi ifomu oyingozi futhi ezingalapheki kunzima kakhulu ukuba nifeze. Kungaba efiselekayo ukweluleka kuphela iziguli ezine izimpawu zesifo kancane ngokushesha uxhumane udokotela, ukuze hhayi ukusebenzisa inqubo.
Izimpawu lezinkinobho evame ukubuzwa yibo bonke izinhlobo:
ukulunywa eqinile futhi ngezinye izikhathi babulawa we zangasese bangaphandle esithweni sakho sangasese. Ngezinye izikhathi ungase ubone raschosy futhi soma ku izindebe labia, njengoba isiqinisekiso uphawu;
ukuvuvukala kanye ububomvu ka nolwelwesi lwamafinyila. Coleitis futhi urethra - izimpawu ezivame kakhulu trichomoniasis ukutheleleka. Ngenxa edema ukuchama kunzima futhi kubuhlungu, ngesikhathi bezoziphatha, owesifazane azizwa umuzwa esivuthayo ubuhlungu;
ezinkulu imvelo frothy, okungase ukuya abamhlophe echichimayo;
ukungakhululeki kanye elalimbelesele ubuhlungu esiswini;
ukuphazamiseka umjikelezo wokuya esikhathini futhi isimo zokuya esikhathini.
Zonke lezi zimpawu ukhombise ukuba khona lesi silwanyana ku izitshalo zesifazane izitho zangasese. Kodwa akufanele sikhohlwe mayelana ukuthutha asymptomatic we amagciwane.
Imodi ukudluliswa Trichomonas ikakhulukazi ngokocansi, kodwa umzimba ungathola ezithweni zangasese ngenkathi usebenzisa ithawula ezivamile noma yelineni.
Kwatholakala ukuthi Trichomonas idluliselwa ngokusebenzisa amathuluzi yezokwelapha, kanye ngesikhathi ukudlula ingane ngokusebenzisa emgudwini wokuzala. Esimweni esinjalo ke sitholakale trichomoniasis azalwa nako.
Baby kungaba batheleleke kusukela umama ngenkathi zisesesibelethweni, ngokusebenzisa amanzi fluid.
Ubunikazi Trichomonas temlomo kubonisa ukuthi kungenzeka igciwane ngisho at contact ngomlomo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi amagciwane ithelela uhlelo genitourinary kuphela, kanye nezinye izitho izimpawu isifo hhayi izimbangela futhi izimpilo ezinde.
Trichomonas kuyinto kakhulu sensitive kwelanga, futhi kakade 45 degrees ayafa. Umzimba ubambisana kahle nge gonococcus, inqubo iyashesha futhi kanzima hroniziruetsya esilaphekayo.
Ngokucophelela, roseola! Izimpawu kungenzeka ukuthi ingabi!
Kuyini codependency e ubudlelwano? Indlela ukuqeda codependency: Udokotela wengqondo
Teleportation. Kungenzeka yini lo mkhuba kusukela iphuzu zesayensi of umbono?
Indlela ukwazi izingubo usayizi wesithombe sakho zabesifazane? Indlela ukunquma usayizi izingubo zabesifazane?